ငါ porn သုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ယခုငါပိုဆိုးခံစားရတယ်။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ငါ porn သုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ယခုငါပိုဆိုးခံစားရတယ်။ ဒီသာမန်ဖြစ်သနည်း
သငျသညျ သာ. ကောင်းသည်ဟုခံစားရရှေ့တော်၌ထိုဦးနှောက်အပြည့်အဝ sensitivity ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနှင့်သူ့ဟာသူ rewires အဖြစ်ဟုတ်ကဲ့, ကပိုဆိုးခံစားရရန်ပုံမှန်ပါပဲ။ Recovery ကိုရံဖန်ရံခါတစ် linear process ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတ်ခွာစိတ်ဆင်းရဲစေနိုင်ပါတယ်။ လိင်စိတ်နှိုးစက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်“ သက်မဲ့လိင်အင်္ဂါ” (“ Flatline”) ၏ခံစားချက်သည်အစတွင်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ ကြည့်ပါ ကူညီပါ!!! ငါ porn ဖြတ်သော်လည်းငါ့အာနိသင်နှင့်လိင်စိတ်ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။
“ ဒီနေ့ဟာကျွန်တော့်ရဲ့ ၇ ရက်မြောက်နေ့ကိုညစ်ညမ်းတဲ့အမှတ်အသားနဲ့၊ ဒါပေမယ့်ငါမတိုင်မီဒီမကောင်းတဲ့ခံစားခဲ့ရဖူးဘူး။ ငါ့မှာ libido မရှိ၊ နံနက်သစ်သားလည်းမရှိ၊ ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။ ပိုဆိုးတယ်။ ငါကြောက်လာပြီ ဒါပုံမှန်လား။
အခြားတစ်ဖက်တွင်အချို့သောယောက်ျားတွေပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒါစဉ်အတွင်းပိုကောင်းခံစားရပေမယ်ပြီးတော့တခါတရံနောက်ပိုင်းတွင် reboot အတွက်အချိန်ပိုဆိုးခံစားရတယ်။ အခြားသူများကိုညစ်ညမ်းစွဲထက်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက် reboot ကြိုးစားနေစေခြင်းငှါအနေဖြင့်အချို့သောယောက်ျားတွေ, ပြင်းထန်စွာစွဲဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖျက်သိမ်းရေး ချက်ချင်းအကျိုးခံစားခွင့်ကြုံနေရအတွက်အခြားအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက flatline နေဆဲနောက်ဘက်က၎င်း၏ရုပ်ဆိုးခေါင်းကို may ။
(နေ့ရက်များ ၅၊ ၆) ။ ဒီနေ့ဟာအခက်ခဲဆုံးနေ့ရက်တွေပဲ။ အသေးစား - အလတ်စားတိုက်တွန်းချက်အချို့။ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကတကယ်တော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသစ်ကိုရှာဖွေရန်တိုက်တွန်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်သာယာဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုဆုံးရှုံးစေသောစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုတစ်ခု၊ ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်ခံစားမှုတစ်ခုပျောက်ဆုံးနေသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်၏ယေဘုယျစိတ်နေသဘောထားနှင့်အပြောအဆိုသည်မျှတမှုမရှိဟုထင်ရသည် (ငါမျှမျှတတပြောမည်မဟုတ်သော်လည်းမတည်ငြိမ်သော) ။
ဒီအကောင်လေးတစ်ဦးကိုပြု၏ ယူကျု့ဗီဒီယို တစ် ဦး reboot ၏အစအ ဦး မှာစွမ်းအင်နိမ့်အကြောင်းကို။ (အချို့သောယောက်ျားများသည်ဆုတ်ခွာခြင်း၏စိတ်ဆင်းရဲမှုကို“ ပြားလိုင်း” ဟုရည်ညွှန်းသည်ကိုသတိပြုပါ။ အမှန်မှာ၊ ဝေါဟာရသည်မူလကဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သောလိင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုသာရည်ညွှန်းသည်။
Recovery ကို linear မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ခရီးအလွန်ထောင်လွှားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်အဦးဆုံးသောရက်သတ္တပတ်ကြောက်မက်ဘွယ်ခံစားရတယ်။ နောက်တစ်နေ့ 2-3 ရက်သတ္တပတ်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့သည် flatline။ ငါနှစ်ပေါင်းခဲ့သကဲ့သို့မကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျ, ကျမဲ့, စိုးရိမျ, စိတ်တို, ပင်ပန်း, etc ဒါဟာစာသားအတိအကျကိုကင်းသို့မဟုတ် adderall နေ comedown နဲ့တူခံစားခဲ့ရ; ဆက်ဆက်အားလုံး dopamine related ။ သော့ချက်သည်ဤ flatlines အားဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ရဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ငါကကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်လာသောအခါအကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံး flatline နေ့က 70 န်းကျင်သို့ရောက်ကြ၏။ Nope ။ ကောင်းမွန်သောသတင်းတိုင်း flatline ထိုနောက်ငါတိုးတက်မှု၏အသစ်တခုအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ငါအားကောင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ထွက်လာ၏။ ရုံအစစ်အမှန်ပြောင်းလဲမှုသင့်ဦးနှောက်အတွင်းမှဖြစ်ပျက်နေသောသောနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်သူစိတျအပွောငျးအလဲ၏ထင်ပါတယ်။
အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအားလုံးနေရာအရပ်မှာပါပြီ။ စနေနေ့ (နေ့ ၆) ကျွန်ုပ်သည်အဆိုးဆုံးသောစိုးရိမ်မှုနှင့်ထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်သည်။ ငါအဲဒီညမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့နောက်ရက်ထပ်ထပ်စီရတော့မယ်။ ဒါပေမယ့်လူကငါစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခံစားရတယ်!
ထို့နောက်တစ်နေ့တာတွင်အိမ်၌အနည်းငယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောကင်လုပ်ခိုင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှ dopamine များပြားလာခြင်းကိုရိုးရိုးသားသားခံစားမိနိုင်သည်။ ငါဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့နည်းနည်းလောက်စမ်းကြည့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းမြန်သွားတဲ့လူတစ်ယောက် ငါနောက်ဆုံးတော့ပြင်ဆင်ချက်ရတဲ့တဲ့ဘိန်းဖြူ junky ကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပိုကောင်းလာတယ်။ အအေးမိရောဂါလက္ခဏာများမရှိတော့ပါ။ လည်ချောင်းနာသွားပြီ; ငါသည်ငါ့နှာခေါင်းမှတဆင့်အသက်ရှူနိုင်; ငါလုံ့လရှိသူ, ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်; နှင့်မခံနိုင်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုလုံးဝလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်!
အရူး ... အဲဒီညမှာကျွန်မမှာရက်စွဲတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအော်ဂဇင်မလုပ်ချင်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့ခံစားချက်တွေ၊ ကံကောင်းတာကငါသူမရဲ့ထံမှစာသားကိုရတယ်, ငါ့အာရုံကိုလွှဲနှင့်ငါရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သည် ... ရက်စွဲကောင်းစွာသွားလေ၏။
၇ နဲ့ ၈ ရက်တွေမှာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဟာပိုပြီးမျှတတဲ့ခံစားမှုကိုစတင်ခံစားလာရပြီ။ တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရင်ငါ့ရဲ့အသံကပိုပြီးနက်ရှိုင်းပြီးပိုခိုင်မာတယ်။ ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုများလွန်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ခုခုပြောနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းတဲ့နေ့တွေတုန်းကငါ့အသံဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်လျင်မြန်စွာပြောမိသည့်အခါကျွန်ုပ်၏အသံသည်နူးညံ့လွန်းသဖြင့် (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်သည်အပျိုဖော်ဝင်သောအခါ (သို့) ၃၁ နှစ်ဖြစ်သည်) စကားပြောရုံဖြင့်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်၏အသံကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုကိုသံသယဝင်စေနိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အသံတိုးတက်မှုများအတွက်ပင်ထိုက်တန်သည်ဟုခံစားမိသည်။
ဒီနေ့ ၈ ရက်မှာငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာပဲ၊ ဒါကအလိုလိုသိတဲ့အကျင့်တစ်ခုလိုပဲ။ ငါခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာသေချာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအလျင်မြန်ဆုံးစိုက်ထူမှုခံနိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ porn ဒါမှမဟုတ် fantasy တောင်မှမရှိခဲ့ဘူး။ ထပ်ခါတလဲလဲရပ်တန့်ဖို့ခဲယဉ်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါရေအေးသောက်ပြီးအာရုံပြောင်းလိုက်တယ်။ အခြားရည်မှန်းချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းကများစွာအထောက်အကူပြုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကြွန်တော် ဦး နှောက်ထဲမှာဂီယာပြောင်းတာနဲ့တူတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ပထမခြေလှမ်းမှာကျွန်ုပ်ဆေးစွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းနှင့် PMO သည်ကျန်းမာသည်ဟုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်တို့မဟုတ်ကြောင်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုရဲ့နောက်ကွယ်သိပ္ပံပညာအကြောင်းကိုကျွန်တော်မလေ့လာခင်မှာဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကြောက်စိတ်ကိုခံစားမိပြီးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မဟာညစ်ညမ်းတဲ့ခံစားချက်ရှိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒီတော့အဲဒါကိုအကောင်အထည်ဖော်တာဟာကျွန်တော့်အတွက်ကြီးမားတယ်။
ဘယ်လိုဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်ကြုံတွေ့နေရသလဲ။ အခု ၁၀ ရက်မှာငါအစာအိမ်ထဲမှာအမြဲတမ်းထုံးစံရှိတယ်၊ စာမေးပွဲဖြေတာဒါမှမဟုတ်အင်တာဗျူးတော့မယ်။ ဒါ့အပြင်ငါ shit အဘို့အအာရုံစူးစိုက်လို့မရပါဘူး။
ငါခဏစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ် ယခုအချိန်တွင်ငါတော်တော်လေးပြင်းထန်သော moodswings ဖြတ်သန်းသွားပါ။ ငါ ok ခံစားမိသည့်အခါမိနစ်အနည်းငယ်, ထို့နောက်သူမနောက်ကျော ruminating, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါပေါ်သို့ ... အခြေခံအားဖြင့်ငါသည်ငါ့ ဦး ခေါင်း၌မှီဝဲ။ သင်၏အစာအိမ်အတွင်းရှိအထစ်သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီးမည်သည့်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဆေးစွဲခြင်းမှထွက်ခွာသွားရန်အလွန်အသုံးများသောကြောင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်ကိုသိရှိထားခြင်းဖြင့်လုံခြုံသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအတွေ့အကြုံအရကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ငါရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှု / စိတ်ဓာတ်ကျမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အနည်းငယ်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း ပထမဆုံးရက်သတ္တပတ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်တော့ငါနောက်ဆုံးတော့တုန်လှုပ်နေမိတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်တစ်နေ့ 28 အပေါ်ပေါ့ဒါပေမယ့်ရက်ပေါင်း 14-21 ဆုတ်ခွာလက်ထက်၌။ ကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုငါ့အဓိကတစျခုဖွစျသညျ။ , အစွန်းပေါ်မှာကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့ခြိနျလုံး, ငါသည်အပင်လူတိုင်းကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ခဲ့ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်နဲ့တူခံစားခြင်းမရှိဘဲအားကစားခန်းမမှာငါ့ရေမသောက်နိုင်ကြသလိုခံစားရတယ်ငါ့ကိုယ်မသောက်ရပြန်သည်ငါ့ခေါင်းကိုထားသောအခါငါကြီးကဲ့သို့အလုံးကိုမတည်ငြိမ်သောကိုသွားမယ်လို့ အလွန်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့သည်အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်တိုက်ခိုက်မှုရှိသည်ဖို့အကြောင်းကို။ သူတို့ကကျေးဇူးတင်စရာယခုစဲသွားတော့ရှိသည်ဟုပုံရသည်။
ဒါဟာခွေးပဲ။ ဒါဟာပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ fuck ဆိုတဲ့ခွေးပါပဲ။
ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၄၂ တွင်ဖြစ်သည်။ အိုမရှိဘဲအရှည်ဆုံးနှင့်ဒုတိယ၊ MO သို့မဟုတ် PMO မပါရှိလျှင်အရှည်ဆုံး။ ငါ PMO စံချိန်ကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာလုပ်မယ်။ ဘာမှမပျော်ဘူး။ လူမှုရေးအရအရင်ကထက်ပိုဆိုးတယ်။ ငါမပေါင်းချင်ဘူး ငါပေါင်းသင်းရသောအခါ, ငါများသောအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော dumbass ခံစားရတယ်။ ဒါဟာရှက်စရာပါပဲ သင်ဆုတ်ခွာနေစဉ်သာမန်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ဘုရားသခင်အားရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကလူတွေဟာကျွန်တော့်ရဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးညစ်ညမ်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာတွေးမိသည်။ ငါကသဘာဝသရုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါကအခုပျော်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ဦး ထုပ်တစ်စက်ကျသောအခါကျွန်ုပ်၏စိတ်နေစိတ်ထားပြောင်းလဲသွားတတ်သည်၊ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခါမှပြaနာမရှိခဲ့သည့်ဒေါသစိတ်၊
ငါအာရုံစူးစိုက်လို့မရဘူး ငါရှုပ်ထွေးရ ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအလွယ်တကူမလိုက်နိုင်ဘူး ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအိပ်မောကျနေချိန်မှာhandရာမလက်ကကျွန်တော့်ကိုဖိနေသလိုခံစားရတယ်၊
အိုး, ငါ့လိင်တံရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာပြန်သေပြီကြေငြာခဲ့သည်။ ဒါကငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေထဲကအနည်းဆုံး ...
ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ငါလည်းအမြန်ဆုံးခံစားခဲ့ရတယ် လွန်ခဲ့သောခြောက်လကကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှု၏ပထမရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ရသည်။ ငါခံစားခဲ့ရတာထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်တယ်၊ လူမှုရေးအရပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိတာပေါ့။ အဲဒီရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာကျွန်မဟာမိန်းကလေးတွေရဲ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲဆောင်ပြီးကျွန်မရဲ့လက်ရှိရည်းစားနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ ယခုမူကား ... ကောင်းပြီ, ငါကင်လုပ်ခိုင်းကဲ့သို့ခံစားရသည်။
ပစ္စည်းပစ္စယများကိုပိုမိုရယူခြင်းနှင့်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းခံရသော်လည်းနံနက်သစ်သားသည်သွား၏။ ငါ Flatline အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးပြီ, ဒါပေမယ့်ဒီအသေးချွတ်ပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်တံသည်ပျမ်းမျှအထက်အနည်းငယ်မျှသာရှိပြီးအမြဲတမ်းအလွန်သေးငယ်သောအရသာရှိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၃ ရက်ကကျဆင်းခဲ့သည်။ အများကြီး။ ၎င်းသည်တိုတောင်း။ ကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့်အရောင်မှောင်လာပြီးပန်းရောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောခရမ်းရောင်သည်။ သူလည်းသေပြီလို့ခံစားရတယ်။ PMO ကိုမစမ်းကြည့်ရင်သေရင်လဲကျနိုင်တယ်။ အရောင်ပြောင်းလဲမှုကရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်။
လူတိုင်းပြောနေသည့်ယုံကြည်မှုရှိလား ငါစိတ်ဓာတ်ကျ asexual နဲ့တူခံစားရတယ်။ ကျွန်မမှာညစ်ညမ်းတဲ့လိင်မှုကိစ္စနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတစ်ခုခုကိုစွဲလမ်းမှုမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြိုကွဲသွားရင်တောင်မှသူမခံစားခဲ့ရဖူးတဲ့ဝမ်းနည်းဖွယ်ခံစားချက်တွေရလာပါတယ်။ ပြီးတော့ငါဟာအလေးမများတဲ့အလေးတွေကိုလည်းတိုးတက်အောင်လုပ်နေတယ်။ မကြာသေးမီကပဲငါ့ရဲ့တတိယစုံကိုဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာမှမပြီးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကအသွင်အပြင်နဲ့ခံစားချက်အပြင်းအထန်ပြောင်းလဲမှုကိုကြုံတွေ့ဖူးပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်အားနည်းလာတာလား။ အကယ်၍ ဤအရာအားလုံးသည် Flatline ဖြစ်ပါကသင်တစ်စုံတစ် ဦး မှသင်မြင်တွေ့ခဲ့သမျှအရှည်ဆုံးကဘာလဲ။ ဒီဟာက crap နဲ့တူတယ်…
ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်း၊ သင့် ဦး နှောက်ဟာလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ရွှင်လန်းစေပြီးစိတ်အားထက်သန်စေတဲ့အဓိကအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းတွေကိုမှန်ကန်စွာအဆင့်မြင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ (ဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်မှု) ကိုမေ့သွားတယ်။ သူတို့ပျောက်နေချိန်မှာသင်ပိုဆိုးသည်။ dopamine ကဲ့သို့သောအာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများသည်လုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုလုပ်ဆောင်သောကြောင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကွဲပြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အာရုံကြောဓာတုဗေဒတစ်ခုမှမညီမျှမှုသည်အခြား ဦး နှောက်ဓာတုပစ္စည်းများ၏သတင်းစကားကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင့် ဦး နှောက်ရှိအာရုံကြောဓာတုဗေဒသည်ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားသောသံစုံတီးဝိုင်းကဲ့သို့သောဆင်ဖိုနီကိုကစားသည်။ ရုပ်သိမ်းသည့်အချိန်တွင်ဂီတပညာရှင်တစ် ဦး စီသည်သူ့ကိုယ်ပိုင်တီးလုံးကိုဖွင့်သည်။
လေ့ကျင့်ခန်း, ဘာဝနာများနှင့် socializing အားလုံးသဘာဝကျကျဦးနှောက်ဟန်ချက်ညီကိုကူညီပေးပါတယ်။ ထွက်ခွာသည် တစ်ကိုယ်တော် tools များ နည်းစနစ်များအတွက်ယောက်ျားတွေအထောက်အကူဖြစ်စေတွေ့ပြီ။ ဒါ့အပြင်ကြိုးစားကြ အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် နှင့် Bob's Porn Addiction Recovery သိကောင်းစရာများ.
အကယ်၍ သင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာစောင့်ဆိုင်းပါကသင့်အား ဦး နှောက်ကသင့်အား၎င်းကိုညစ်ညမ်းဆေးဝါးများဖြင့်“ ဆေး” ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ နည်းသော ) အချိန်ကျော်တုံ့ပြန်မှု။ နောက်ဆုံးတွင်သင့်ဦးနှောက်အလုပ်ရှုပ်ရရှိသွားတဲ့နှင့်ထုတ်လုပ်စတင်သည် (သို့မဟုတ်ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံဖြစ်လာ) ကိုသော့ချက် neurochemicals ။
ထိုအခါသင်ပါလိမ့်မယ် အမှန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာဆေးကုသမည့်အစား၊ စိတ်ရှည်ပါ။ သင်၏အသက်၊ ဦး နှောက်နှင့် porn အသုံးပြုမှုကြာချိန်ပေါ် မူတည်၍“ ပုံမှန်” သို့ပြန်သွားရန်ရက်သတ္တပတ်များသို့မဟုတ်လများစွာကြာနိုင်သည်။
ဤတွင်စိတ်ဆင်းရဲ၏အမျိုးမျိုးစကားလုံးဖော်ပြချက်များမှာ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ ကလူမိုးသည်းထန်စွာ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေပြန်လည်နာလန်ထူစဉ်အတွင်းသတင်းပို့ပါ။ ထိုစာမျက်နှာမှာကရှင်းပြသည်အဖြစ်သူတို့ကမူးယစ်ဆေးထုတ်ယူဖို့အလွန်ဆင်တူနိုင်ပါတယ်။ ကြည့်လည်းရှိ ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောငါ၏အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လား?
အော်ဂဇင်ရိုက်ခြင်းကိုငါရပ်တန့်လိုက်သောအခါ (ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်မျှမရှိခဲ့ပါ) ကျွန်ုပ်၏အစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များသည်ငရဲသို့ရောက်သွားခဲ့သည်။ ငါအစာ၊ အဆီ၊ သကြားနဲ့အင်တာနက် (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံ) ကိုစွဲသွားတယ်။ ထို့ကြောင့်ငါသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကျန်းမာလာခဲ့သည်။ ယခု ၁-၂ နှစ်အကြာတွင်နှင့် (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှ) ၁၀ သုတ်ရည်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရှည်ဆုံး "သုတ်ရည်ထိန်းသိမ်းမှု" တွင် (တစ်လ + အားကြီးသော) ကာလ၌ရှိသည်။ ငါမစွန့်ခွာမီငါအပြင်ဘက်လှုံ့ဆော်မှုမှအားနည်းချက်ဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုမိသည်။